Ezaka trano fidiovana – FJKM Ambavahadimitafo Ezaka trano fidiovana |
A la une.Antso sy filazana.Ezaka trano fidiovana.Randrianarisoa Alain
Publié le 11 mai 2020 à 10:05
« Fa maty ny finoana raha tsy misy asa »
Izany no tenin’Andriamanitra hifampiarahabantsika sy hifanentanantsika, notarihin’ny fanahin’Andriamanitra hiara-mivavaka eto amin’ity FJKM Ambavahadimitafo ity.
Madiva ho vita ny fanamboarana ny trano fidiovana ato atsinanan’ny trano fiangonana. Isaorantsika an’Andriamanitra ny amin’ny ezaka efa nataontsika tsirairay avy, na ny fiangonana, ny tompon’andraikitra, ny teknisiana, izay rehetra niasa tao anatin’izany famitàna izany asa izany.
Isaorana ny Tompo fa tena mandroso tokoa ny asa, kanefa ry havana samy mahatsiaro koa isika fa ao anatin’ny fotoan-tsarotra isika, ka hanaovana izao antso avo izao. Antso ho anao zanak’Ambavahadimitafo, ho anao mpino rehetra izay mamaky izao lahatsoratra izao, mba hitondra am-bavaka ny asa ataon’ny fiangonana, mba hanoloranao izay hitarihin’ny Fanahy anao mba ho entina manatanteraka izao asa izao. Eo ny fikasan’ny fiangonana amin’ny alahady 17 sy 30 mey 2020, hanao fotoam-bavaka manokana hoenti-manana izany asa izany.
Ho anao kosa izay tsy afaka ny ho tonga aty am-piangonana @izany fotoana izany, dia azonao atao tsara ny mandrotsaka ny fandraisanao anjara amin’ny Biraon’ny fiangonana.
Tsarovy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny fitiavanao sy ny asa nataonao ho voninahitry ny anarany. Izy anie hampahery ny tsirairay hiara-mientana, hiara-miombona ary hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny alàlan’izao asa izao, ka mba ho saina iray sy vava iray no hiarahantsika mankalaza an’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy Tompontiska.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra, fa ny fitahiany, ny fiadanany kosa ho aminao mandrakariva. Amen.
Randrianarisoa Alain, mpitandrina